स्टर्प मोल्ड मिसिन बिक्री को लागि - Jxmachinery.com
स्ट्रिप बान्डिंग मिसिन एक उपकरण हो जसले स्वचालित मोर्दोको लागि इस्पात सलाखहरू प्रयोग गर्दछ। यो सञ्चालन गर्न अपेक्षाकृत सरल छ। ठूलो आकारको बिरुवाहरू लिन यो पनि सुविधाजनक छ। झुक्याउने मेसिन चाँडै गठन भएको छ र प्रशोधन क्षमता अपेक्षाकृत उच्च छ। सीएनसी मा झुन्ड्याउने केन्द्रलाई अझ बलियो बनाऔं। उत्पादन प्रक्रिया के हो? जब CNC स्टील झन्झट गर्ने मशीनिंग मशीनिंग, पहिलो मुख्य सुदृढीकरण मा मुख्य रिब को ठाँउ, र तब कूप सुदृढीकरण फ्रेम मा रिब को सुदृढीकरण को ठाँउ। जब रिब तय भयो, डिस्क तदनुसार निश्चित गरिएको छ। संख्यात्मक नियन्त्रण इस्पात पट्टी को मोरङ केन्द्रको प्रारम्भिक वेल्डिंग गर्न सकिन्छ। रहरहरू र मुख्य रिजहरू क्रस-वेल्डेड र निश्चित छन्, र स्ट्राइकहरू लगातार समानांतरमा दुई पटक घाउ हुन्छन्, र त्यसपछि सामान्य वेल्डिंग अपरेसन प्रदर्शन गर्न सकिन्छ, र दुई डिस्क एकैसाथ घुमाईन्छ, ताकि इस्पात सलाखहरू लगातार छन्। मुख्य सुदृढीकरण लपेटो र वेल्ड, त्यसपछि वेल्डिंग कट अफ्रिका समाप्त पार्नुहोस्, र त्यसपछि दुई-मो घुसमा घुमाउनुहुन्छ, त्यसपछि वेल्ड, र त्यसपछि रिब कट गर्नुहोस्।
स्ट्रिप बान्डिंग मिसिन मोडिङ पिन शाफ्ट घुसाउनका लागि काम गर्ने प्लेटमा धेरै छेदहरू छन्, र विभिन्न diameters को केन्द्र पिन शाफ्ट बदल्न सक्छ। जब सीएनसी संख्यात्मक नियन्त्रण हुन्छ प्रसारण प्रसारण कस्तो छ? इस्पात झुकाउने मेसिन काम गर्दछ? यसको बारे थप जान्नुहोस्। को झुकने गति इस्पात झुकाउने मेसिन अपेक्षाकृत स्थिर छ। यसले दुवै दिशामा इस्पात पट्टी झुकाउन मोटरको फर्वार्ड र रिवर्स रोटेशन प्रयोग गर्न सक्छ। जब इस्पात झुकाउने मेसिन ड्राइभिङ हुन्छ, पहिला, मोटर पहिला फर्काइन्छ। मोटर घुमाउन घुमाउन घुमाउन घुमाउँछ। चरम को एक पक्ष स्थापित हुनुपर्छ। शाफ्टले बारीमा एक घुम्न घुमाउँदछ, एक शियरमा एक गियर र दुई शाफ्टहरूमा दुई गियरहरू, जसले दुई शफलाई घुमाउँदछ, दुई छायाहरूले तीन गियर चलाउँदछन्, तीन गियरहरूले चार गियर चलाउँछन्। चार गियरहरूले छाती चलाउँदछन्, र कीड़ाले मुख्य शाफ्ट चलाउँछ मुख्य शाफ्टलाई डिस्क चलाउन गाह्रो हुन्छ, र त्यसपछि यो काम सुरु हुन्छ।
जब स्टील बार्सो प्रसोधन गर्दा, अधिक स्टेनलेस स्टील मोन्डिंग मिसिन प्रयोग गरिन्छ। स्टेनलेस स्टील झुकाउने मशीनले विभिन्न डाईमरहरूको इस्पात सलाखहरू झुन्ड्याउन सक्छ। झुकाउने मेसिनको मोटेको गति अपेक्षाकृत छिटो छ।
सीएनसी इस्पात सलाखों को झुकने केन्द्र को आपरेशन विवरण को बारे मा तपाईंलाई कितना थाहा छ?
यसलाई विस्तारमा हेर्नुहोस्।
पहिलो, स्टेनलेस स्टील झुकाउने मेसिनको व्यासमा अनुकूल गर्न सक्षम हुनुको लागि, एक स्राव आस्तीन स्टेनलेस स्टील झुकाउने मेशिनमा थप्न सकिन्छ, ताकि mandrel बीचको अंतर, इस्पात पट्टी र बनावट शाफ्ट समायोजन गर्न सकिन्छ। ।
2. स्टेनलेस स्टील झुक्याउने मेसिनको झुक्याउने मध्यमा झुन्ड्याउने बेला, स्टील पट्टीमा चक्कुले इस्पात पट्टीसँग जोडिएको हुनुपर्दछ ताकि उत्पादनको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न इस्पात पट्टीको घुमावदार आकारको नियमितता सुनिश्चित गर्न सक्दछ।
3. सीएनसी स्टील पट्टीको झुक्याउने केन्द्रको झन्झट प्रक्रियाको बेला, बाङ्गो सामानहरू बदल्न सकिँदैन। यदि मरम्मत रोक्नको लागि आवश्यक छ भने, स्नेहन भागहरू मेशिन हुनुअघि र राखिएको हुनुपर्छ।
The स्टर्प मोन्डिंग मिसिन यो उपयोगिता मोडमा कमर, एउटा ठूलो गियर, एक पिनियन, र घुमाइएको डिस्क सतह समावेश छ। संरचनामा विशेषता छ कि दुई-चरण ब्रेक मोटर र कम्युनिस्ट सीधा एक-चरण घटाउनेको लागि जोडिएको छ; क्यान्सर र ठूलो गियर मेषिङ दुई-चरणको गतिको लागि प्रयोग गरिन्छ; ठूलो गियरले घुमाउन घुमाईएको डिस्क सतहलाई सधैं ड्राइव गर्दछ; घुमाइएको डिस्क सतह एक केन्द्रीय शाफ्ट छेद र घुमाइएको शाफ्ट छेदहरूको बहुतायत संग प्रदान गरिएको छ; र काम गर्ने सतहको पोजीटिङ्ग स्क्वायर पट्टी क्रमशः पोलिसिंग शाफ्ट होलको साथ प्रदान गरिएको छ। दुई-चरण ब्रेक मोटर र कम्युयरर प्रत्यक्ष रूपमा एक-चरण घटाउनेको लागि जुडिएको छ, इनपुट र आउटपुट क्रांति अनुपात सही छन्, झुक्याउने गति स्थिर र सटीक हुन्छ, र विद्युतीय स्वचालित नियन्त्रणले गति परिवर्तन गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ, र ब्रेकले झुकाउने कोण सुनिश्चित गर्न सक्छ। इस्पात पट्टी द्वि-दिशात्मक रूपमा मोटर को अगाडी र रिवर्स रोटेशन द्वारा तुरुन्त छ। केन्द्र शाफ्टलाई सजिलो रखरखावको लागि प्रतिस्थापन योग्य छ। यसमा सीधा चलिरहेका दुईवटा सेटहरू छन् जुन तेर्सो रूपमा ठाडो रूपमा ठाडो रूपमा समायोजित गर्न सकिन्छ। चार कर्षण पाङ्ग्राहरु संग संयुक्त, यो आयोत मोटर द्वारा प्रेरित गरिन्छ को लागि इस्पात पट्टी को सीधा सुनिश्चित गर्न को लागि उत्तम परिशुद्धता प्राप्त गर्न को लागि सुनिश्चित। इस्पात प्रसंस्करण मिसिनहरु मध्ये एक। बुद्धिमान नियन्त्रण प्रयोग गर्न सकिन्छ।
1. धेरै प्रकारको मशीलेबल इस्पात सलाखहरू छन्, व्यास6मिनेट देखि 16mm व्यासमा, त्यसैले अनुप्रयोग दायरा विस्तृत छ।
2, उच्च परिशुद्धताको साथ, इस्पात प्रसोधनको लम्बाई सहिष्णुता +1 मिमी भित्रमा नियन्त्रण गरिन्छ, र मशीनिंग कोणको त्रुटि + ー 1 डिग्री भन्दा बढी छैन। यो प्रसोधन सटीकताले धेरै म्यानुअल अपरेसन भन्दा बढी छ।
3. कामको दायरा ठूलो छ। स्टील पट्टी तेश्रो हुनुअघि, यो नियमित रूपमा (जस्तै डिस्कको रूपमा राखिएको छ) वा अनियमित रूपमा राखिएको छ, यो सजिलै तेश्रो र सीधा हुन सक्छ।
4, गर्म लुकाइएको र चिसो फ्रिज गरिएको स्टील प्रक्रिया गर्न सक्नुहुन्छ, चाहे डिस्कको रूपमा हो।
5. इस्पात सलाखों को प्रभावी उपयोग को सुनिश्चित गर्नुहोस। किनकि यो कम्प्यूटरद्वारा नियन्त्रित छ, फीडमा कति प्रसोधन गरिन्छ, ताकि इस्पात बार अधिकतम हदमा प्रयोग गरिन्छ।
6. फिड को भाग मोटर द्वारा नियन्त्रित छ, र विभिन्न डाईमर को इस्पात सलाखों एक मिनेट को भित्र बदलन सकिन्छ, जो इस्पात सलाखों को बदलन को लागि आवश्यक समय को कम गर्दछ।
7. इस्पात पट्टीको प्रसोधन नियन्त्रण गर्न कम्प्युटर प्रयोग गर्नुहोस्। पट्टीको आकार परिवर्तन गर्न, केवल कुञ्जीपाटीमा इच्छित प्रकारको मशीनिंग चयन गर्नुहोस्। निश्चित निश्चित आकार ढाँचा थप्न वा हटाउन आवश्यक छ, पूर्ण गर्न सफ्टवेयर परिमार्जन गर्नुहोस्
8, उपरोक्त फाईजहरू को अतिरिक्त, यो पनि एक उल्लेखनीय विशेषता छ, त्यो समान विदेशी उत्पादनहरु को तुलना मा, लागत कम छ, मूल्य केवल तिमाही हो, जो उत्पादन को बढावा र बिक्री को अनुकूल छ।
चीन निर्माता 4-12mm स्वचालित सीएनसी नियंत्रण इस्पात तार, rebar झुका मिसिन
पूर्ण स्वचालित सीएनसी नियंत्रण2डी तार झुकाव मिसिन मूल्य
12-16mm तार सीधा काटने मिसिन
automaitc सीएनसी 3D औद्योगिक तार झुकाव मिसिन
स्वचालित इस्पात बार पिंजरे बनाउन मिसिन